トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Into ebaluleke lapho ecindezela etafuleni inhloso ukubona igrafu ukuwa e sasemakhazeni pachinko
Kwakamuva pachinko emakhazeni, isihenqo esikhulu nge umshini okuthiwa i-idatha Lobo, izitolo ukuthi basuke efakwe isibe eziningi. Esitolo bengaphambili ukuvulwa kanye counter ngaphambi, njll, kule umshini ifakiwe, wakamuva amageyimu etafuleni ngamunye ngamunye idatha ngalinye, futhi wamanje jackpot okungenzeka, afika ku hit futhi wenkokhelo ushintsho igrafu ngokuthi igrafu ukuwa ungabona igagasi, okufana nenombolo linemibhikisho.
Futhi, akukho idatha Robo pachinko eshintsha, kuza nge counter idatha ku etafuleni ngalinye.
kuyoba yokulwisana uhlobo olufanayo indima, kodwa ngokuya kuba inani elincane ulwazi njengoba kuqhathaniswa Robo idatha. Kuyinto okuningi okunjalo kokwaziswa idatha Robo kuyabonakala, kodwa idatha ofuna kakhulu ekhonjwe iyona ngamunye bafe kanye igrafu wenkokhelo inguquko.
I igrafu wenkokhelo shintsho, futhi isimo kosuku ukuphuma kwelanga okukodwa ibhola futhi umlutha etafuleni kugrafu yomugqa, yilokhu kwakulula ukubona. Wokukhokha noma ngesikhathi we big hit, isimo kanye we Chan okuqhubekayo, ungabheka ngezinga okwalandela imilutha.
njengoba phezulu futhi phansi Umbutho platform ewumngcingo lokhu igrafu line, ibhola ngaphandle zamanje uqinile, kuyoba nzima ukuba sikwenze ume imilutha.
※ Yiqiniso, zikhona kakade Yebo kungenzeka ukuthi nje inkathi enamandla Horukon lapho wotshani ehlezi ukuma uqinile manje.
phezulu futhi phansi ukunyakaza enobudlova ukuma le igrafu, umehluko okunzima umlutha futhi ngayinye, ngisho usuku phambi eqinile, lapho ukuthi amagagasi zavele ecasukile, yitafula lapho kunengozi of umlutha. Nokho, ukuma okunjalo, selokhu kukhona namandla kuqhume, kodwa obudluleleko, singakwazi futhi kube yokuthi yesikhulumi ukuthi kungalindeleka ukuthi umnotho wawo nishaye Ngamanye amazwi.
Futhi, Ngifuna ukubheka omunye kahle ematfuba platform.
umshini pachinko, kodwa kukhona big hit okungenzeka, ukuthi limelela eceleni manje Amathuba jackpot wamanje nalo, siyoma okungenzeka. Jikela (amayunithi ngayinye jackpot okungenzeka) izikhathi eziningi, kuyoba isiqondiso ngalokho ifikile jackpot eyodwa. Ngokuvamile, lokhu Tai 確 Uma izinga lokuphasa 180 noma ngaphansi, kuyoba emehlweni inhloso yesikhulumi.
waba ngaphezu 180, futhi anda utshalomali afika ku hit, kuba noma ukulinganiswa ngokucophelela futhi walulama kungaba njengoba yaphuma. Nokho, ukuthola platform ezifana 180 noma ngaphansi, empeleni kuyinto enkulu ngempela.
Ngaphezu kwalokho, e-robo idatha, ungabona pachinko ukugcina yonke idatha. Uma thina fake isiqinisekiso, noma has umugqa edinga ukuma mnene ematfuba ekhoneni ithebula isinyathelo futhi esezithela igrafu, ukuma okunjalo esiqhingini eduze emnyango, eziningi ezinjalo, kungaba futhi wasithatha umkhuba yebhizinisi wena.
Okokuqala, anqume imodeli ufuna hit, wenkokhelo eduze umugqa oqondile ume ushintsho igrafu kuphela kungaba noma, ukhethe itafula ngokuvamile ukuhlala ngenhla kwesilinganiso komugqa, esikhundleni salokho, kuba aqatha igrafu ukuwa kusukela, ungase ufune ukufanisa ukukhetha etafuleni ongaphakeme kuphela ongema okungenzeka.
ezibekwe phezu ibhodi game, esimweni idatha kuphela aphebeze kungekho esitolo pachinko, ungase ngeke uphume okungenzeka trapezoid. Ngo
manje, ngoba kukhona esiphikisayo idatha izoveza inani eliphelele ekuvukeleni indlela yokubala laqanjwa ngaphambili, sicela wenze izibalo ngokwakho. Than zifa ushaye futhi, umuntu owabulala ukuhlola amathuba, into lapho ungakwazi ukunqoba nakakhulu. , Khetha ithebula ngokuvamile ukuhlala ngenhla kwesilinganiso komugqa, kwalesi sikhathi, kusukela igrafu ukuwa we aqatha, kungase kube umdlalo ukukhetha itafula ongaphakeme kuphela ongema okungenzeka.
manje, ngoba kukhona esiphikisayo idatha izoveza inani eliphelele ekuvukeleni indlela yokubala laqanjwa ngaphambili, sicela wenze izibalo ngokwakho. Than zifa ushaye futhi, umuntu owabulala ukuhlola amathuba, into lapho ungakwazi ukunqoba nakakhulu.